चितवन मेडिकल कलेजमा एक पुरुषको कोरोना सङ्क्रमणबाट निधन — onlinedabali.com
चितवन मेडिकल कलेजमा एक पुरुषको कोरोना सङ्क्रमणबाट निधन
डबली संवाददाता२०७७ भदौं २१ गते
काठमान्डौं । चितवन मेडिकल कलेजमा एक पुरुषको कोरोना सङ्क्रमणबाट निधन भएको छ । अस्पताललमा उपचारको क्रममा उनको निधन भएको हो । निधन हुने पुरुष भरतपुर महानगरपालिका–१५ का ७० वर्षीय वृद्धको आज बिहान उहाँको ८ बजे निधन भएको अस्पतालका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले बताएको छन् ।
अस्पतालका सञ्चार सयोजक हरि बोहोराका अनुसार उनमा छाति र श्वासप्रश्वासमा समस्या थियो । ति वृद्धको भदौ १२ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । उपचारको क्रममा उनको कोरोना परिक्षण गर्दा भदौ १३ गते सक्रमण भएको पुष्टि भएको हो । त्यसपछि उनलाई अस्पतालको कोभिड सघन उपचार कक्षमा भेण्टिलेटरको सहायतामा राखेर उपचाररत थियो ।
यसैबिच नेपालमा शनिबार थप ९ जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको पुष्टि भएको थियो । योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २८० पुगेको छ । शनिबार मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ४५ हजार २७७ पुगेको जानकारी दिएका थिए ।
त्यस्तै शनिबार कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मोरङमा एकैदिन चारजनाको ज्यान गएको छ । शनिबार विराटनगरका दुुई महिला र धनपालथान र बुढीगँगा गाउँपालिकामा एक(एक जना पुरुषको ज्यान गएको पुष्टि भएको थियोे ।
पछिल्ले समय नेपालमा कोरोना जितेर घर फर्किने बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो हप्तामा निको हुनेको संख्या बढिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार देशभर थप १ हजार ५६६ जनाले कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् ।